उमेर बाउ-छोरीको जस्तै तर नाता श्रीमान श्रीमती भएका ५ वलिवूड स्टार ! – Jagaran Nepal
उमेर बाउ-छोरीको जस्तै तर नाता श्रीमान श्रीमती भएका ५ वलिवूड स्टार !
Jagaran Nepal शुक्रबार, माघ २८, २०७८
एजेन्सी हामिले प्रायः सुनेका तथा देखेका छौ कि बिहे गर्दा महिलाको उमेर भन्दा पुरुषको उमेर केही बढी हुने गरेको छ र यहि मान्यता पनि रहि आएको छ ।
तर कतिपय बिहेमा भने महिला पनि ठूलो भएको पाइएको छ त्यस्तै आज हामी तपाईलाई वलिवूडको केही जोडि को नाम बताउदै छौ जसको उमेरले बाउ छोरी जत्तिकै निकै भिन्नता भए पनि वैवाहित जीवन बिताइरहेका छन् ।
सैफ अलि खान र करिना कपुर खान सैफले आफूभन्दा १२ वर्षले जेठी अमृतासँग पहिलो विवाह गरेका थिए । १९९१ मा भएको विवाह २००४ मा टुट्यो । अमृताको तर्फबाट एक छोरी सारा र एक छोरा इब्राहिम रहेका छन् ।सैफले १०१२ मा करिना कपुरसँग दोस्रो विवाह गरे । करिना र सैफको उमेर अन्तार १२ वर्ष रहेको छ ।
धर्मेन्द्र र हेमा मालिनी धमेन्द्रले पहिलो विवाह प्रकाश कौरसँग गरेका थिए । उनले धर्म परिवर्तन गरेर हेमासँग विवाह गरे । १९८० मा उनले हेमासँग विवाह गरेका थिए । विवाहको समय यी दुवैको उमेर अन्तर १३ वर्ष थियो । पहिलो पत्नीबाट उनको दुई छोरा सन्नी र बब्बी देओल र दुई छोरी विजेता र अजिता रहेका छन् भने हेमाबाट २ छोरी ईशा र अहाना छन् ।
संजय दत्त र मान्यता दत्त संजयले पहिलो विवाह ऋचा शर्मासँग गरेका थिए । १९८७ मा विवाह भएको थियो । तर १९९६ मा ऋचाको ब्रेन ट्युमरका कारण मृत्यु भयो । त्यसपछि संजयले रिया पिल्लईसँग १९९८ मा दोस्रो विवाह गरे । यो विवाह पनि लामो समय टिक्न सकेन । उनले २००८ मा मान्यतासँग तेस्रो विवाह गरे । संजय र मान्यतामा २० वर्षको उमेर अन्तर छ ।
साहिद कपुर र मिरा राजपुत साहिदले २०१५ मा मिरासँग विवाह गरेका थिए । दुवैको एकछोरी मिसा छिन् । मिरा उमेरले साहिद भन्दा १३ वर्षले कान्छी छन् ।रितेश देशमुख र जेनिलिया डिसुजा यी दुवैको विवाह २०१२ मा भएको थियो । ९ वर्षको उमेर अन्तर रहेको यो जोडीको दुई बच्चा छन् ।
त्यसैगरी घरमा राम्री र उमेरदार श्रीमती हुँदाहुँदै कतै तपाई बाहिर बरालिइरहनुभएको वा कान्छी भित्र्याएर पौरख गरेको सोच्दै हुनुहुन्छ भने हो सियार रहनुस्–बहुविवाह वा परस्त्री गमनको आ रोप मात्र आउने होइन, अर्कै ठूलो बि त्यास पनि पर्न सक्छ ।
मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री ल्याउने राजनीतिक रस्साकस्सी चलिरहेकै बेला यी सबबाट बेखबर तर दुई युवतीको साथमा रहने एक पुरुष ठूलो फ सादमा परेका छन् ।१९ असारमा प्रचण्ड नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न दुई दिनअघि १७ गते हाल काठमाडौंको शंखरापुर बस्ने सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची गाविस–७ का बासिन्दा एक बैंशालु पुरुष र दुई युवतीको कहानी हो ।
शारीरिक श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने २९ वर्षे कान्छामान तामाङ पहिले नै विवाहित थिए ।सुन्दर र मायालु जेठो श्रीमती हुँदाहुँदै काठमाडौं भित्रिएपछि अर्को २० वर्षे युवतीमाथि पनि आँखा लगाए ।शारीरिक श्रम गरेर जीवन गुजा रा गर्नुपर्ने तर धेरै महत्वाकांक्षा नभएका कान्छामानले एउटै कोठामा बस्ने भएपनि दुईवटी युवतीलाई श्रीातीको रुपमा राख्ने दु स्साहस गरे ।
सुरुमा त दुवैका चाहना र मन मिलाएरै लगे । तर १७ गते ख्यालख्यालमै दु र्दिन बन्यो । दिउँसै म दिरा सेवन गरेका कान्छामान त्यसदिन अपराह्न ३ बजेतिर दुईवटै श्रीमतीसँग जि स्किएर कोठामा बसिरहेका थिए ।
यत्तिकैमा कान्छीलाई अँ गाले । बाहिर रहेकी जेठी भित्र पसिन् । कान्छीसँग ओछ्यानमै रमाउन लागेको देखेपछि गा ली गर्दै भनिन‘काममा जानु छैन, जतिबेला पनि रक्सी खायो, दिउँसै यस्तो के गर्न लागेको रु’ कान्छामानले फकाउने शैलीमा भने धेरै नकरा न, तेरो पनि पालो आउँछ ।एकातिर कान्छी ल्याएको, अर्कातर्फ काममा जान छाडेर दिउँसै मा पसे गरी कान्छीसँग र तिक्रि डामा लीन हुन लागेको देखेपछि जेठीको दि माग र न्कनु अस्वभाविक थिएन ।
उनले झ म्टिएर बर्को ओढी कान्छीसँग सुतिरहेका पतिले ओढ्ने तानिन् ।कान्छी रातो मुख लगाउँदै निस्किइन् । तर, अ र्धनग्न अवस्थामा रहेका कान्छामानले आफूलाई सम्हालेनन् । बरु मौन रहेर जेठीलाई रिसाएको आँखाले हेरे ।पति र सौताको व्यवहारबाट हैरान भएकी जेठी झन् रिसाइन् ।उनले कान्छी ल्याएपछि आफूसँग भएका व्यवहार सम्झिइन् । कान्छीसँगै बढी रत्तिन थालेपछि आफ्ना स्वाभाविक इच्छा मार्न बा ध्य भउको पनि समिझइन् र कोठाबाहिर उभिरहेकी कान्छीतिर हेरिन् ।